ပြည်သူ့တပ်မတော် ); }
ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ်မှ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ထံ ပေးစာ
Posted by demoarmy အချိန် 4:55 PM0ထင်မြင်ချက်
Posted by demoarmy အချိန် 9:35 AM0ထင်မြင်ချက်
Posted by demoarmy အချိန် 9:33 AM0ထင်မြင်ချက်
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ဘယ်သူသတ်သလဲ အပိုင်း (၁)
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန် အပိုင်း (၂), (၃), (၄), (၅),
Posted by demoarmy အချိန် 4:21 PM0ထင်မြင်ချက်
နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတက္ကသိုလ် ၏ သင်တန်းသား အမည်စာရင်းများ
နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတက္ကသိုလ် သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁) သင်တန်းသား အမည်စာရင်း
နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတက္ကသိုလ် သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၂) သင်တန်းသား အမည်စာရင်း
နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတက္ကသိုလ် သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၃) သင်တန်းသား အမည်စာရင်း
နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတက္ကသိုလ် သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၄) သင်တန်းသား အမည်စာရင်း
Posted by demoarmy အချိန် 4:16 PM0ထင်မြင်ချက်
ယနေ့ စစ်တပ်...... ဘာတွေဖြစ်နေသလဲ (၃၉)
တတိယနှစ် ဗိုလ်လောင်းဘ၀တွင်လည်း အပတ်စဉ်အလိုက် အားကစား ပြိုင်ပွဲအတွက် ကိုယ့်ဖာသာ လေ့ကျင့်ရပါသည်။ (ရေကူးပြိုင်ပွဲ) စာပေ၊ စစ်ပညာမှာလည်း ပိုမို အဆင့်မြင့် လာပါသည်။ အထူးသဖြင့် စာပေ သင်ကြားရခြင်းတွင် ပိုမို စိတ်ဝင်စားလာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်အောင် သင်ကြား ပို့ချပေးနေသော နည်းပြဆရာ၊ ဆရာမတို့ကလည်း (စာရေး ဆရာကြီး ဦးအောင်သင်း နည်းပြလုပ်နေစဉ်က ကဲ့သို့ပင်) တပည့်များအပေါ် မေတ္တာ၊ စေတနာ အပြည့်အ၀ဖြင့် ရှင်းလင်းပို့ချ သင်ကြားပေးသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
တတိယနှစ် ဗိုလ်လောင်းဘ၀တွင် စာကြည့်တိုက်ကြီးကို ကျနော်တို့ သုံးခွင့်ရလာပါပြီ။ တပတ် စဉ်လုံး အယောက် (၂၀၀)ကျော် ရှိသည့်အထဲ စာကြည့်တိုက်သို့ လူတိုင်းမသွားပါ။ စာပေ၀ါသနာ ပါသူ နည်း၍ ထင်ပါသည်။ စာကြည့်တိုက်သည် အမြဲပင် လူရှင်းနေတတ်၏။ ကျနော်တို့ စာသင် ချိန် ဇယားတွင် အပိုချိန်ဟူ၍ ပါလေ့ရှိရာ ထိုအချိန်ကျလျှင် နည်းပြဆရာ မလာတတ်ပေ။ ထိုအချိန် ကို လူတိုင်းပင် သူတို့ အကျိုးရှိမည်ထင်သလို အသုံးပြုကြ၏။ အချို့ကား စာဖတ်၊ အချို့က စကား ၀ိုင်းဖွဲ့၊ အချို့က ဆေးလိပ်သောက်၊ များသောအားဖြင့်တော့ စာသင်ခုံပေါ်တွင် နံစောင်းတင်၍ လက်မောင်းကို ခေါင်းအုံးလုပ်ကာ အိပ်ကြတာများပါသည်။ ကျနော်လည်း တခါတရံ အိပ်ပါသည်။
များသောအားဖြင့် ကျနော်၏ အားလပ်ချိန်တိုင်းကို စာကြည့်တိုက်တွင်သာ အချိန် ဖြုန်းခဲ့၏။ စာကြည့်တိုက်ကြီးသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒုတိယ အကြီးဆုံးဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ အတော်ပင် ကြီးမားသည် ထင်ရသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဤကဲ့သို့သော စာကြည့်တိုက်မျိုးကို ပထမ ဦးဆုံး တွေ့ကြုံ ရခြင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ကျနော့်မှာ စာအုပ်လောဘကြောင့် ကျနော့် နာမည်နှင့်လည်း ငှားသည်။ သူငယ်ချင်း နာမည်နှင့် လည်း ငှားသည်။ တခါငှားလျှင် တယောက် ဘယ်နှစ်အုပ်ဟူ၍ ကန့်သတ် ထားခြင်းကြောင့် လောဘကြီးသော ကျနော့်မှာ ဤသို့ ဤနှယ် ကြံစည်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ပန်းသည် မစာဥ၊ ချဉ်ပေါင်ရွက်သည် မောင်မှိုင်း၊ စံပယ်ပင် စသော ရှေးခေတ်ကာလပေါ် ၀တ္ထုမှ သည် နှောင်းခေတ် ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီခေတ် အတွင်းခန့်အထိ ကြားကာလ တလျှောက် ထုတ်ဝေ ခဲ့သော ၀တ္ထုစာစောင် မြောက်မြားစွာ ရှိပါ၏။ ပေပုရပိုက်၊ ကျမ်း စသည့်တို့လည်း မြောက်မြားစွာ ရှိပါ၏။ စစ်ပညာနှင့် ပတ်သက်၍လည်း ခေတ်မှီ အတတ်ပညာ စာစောင်များအထိ များမြောင်စွာ ရှိပါသည်။ ကျနော်ကတော့ နိုင်ငံသမိုင်း။ စစ်သမိုင်းနှင့် အုပ်ချုပ်ရေး နည်းစနစ်များ၊ နိုင်ငံရေး သဘောတရားပါသော စာအုပ်များကိုသာ နင်းကန်ကျုံး၍ ဖတ်ပါသည်။ မှတ်ပါသည်။
တတိယနှစ် ဗိုလ်လောင်းဘ၀တွင် ပြင်ပ လေ့လာရေးဟူ၍ အပျော်ခရီးစဉ် မရှိတော့ပဲ ပြည်သူ့ဘ၀ အကျိုးပြုရေးနှင့် ပြည်သူ့စစ်သင်တန်း ပို့ချရန်ဆိုပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ခေါင်သော၊ ဖွံ့ဖြိုးမှု နည်းသော စစ်တပ်နှင့် ကျွမ်းဝင်မှုနည်းသော နေရာဒေသတို့ လုပ်အားပေးခရီး သွားရောက်ရင်း ရပ်ရွာ ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကို စစ်ပညာ သွားသင်ပေးရပါသည်။ ဗိုလ်လောင်းတိုင်းက ကိုယ်တတ် မြောက်သော စစ်ပညာကို ပြည်သူ့စစ် တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား သင်ကြားပေးခဲ့သော အစဉ်အလာရှိခဲ့ ပါသည်။
ထိုပြည်သူ့ ဘ၀လေ့လာရေး ခရီးစဉ်တွင်မှ ကျနော်သည် တိုင်းပြည်အတွက် အလုပ်လုပ်ရန် များစွာ ကြိုးစားဖို့ လိုသေးသည်ဆိုသော အားမလို အားမရစိတ် အခြေခံ၍ စစ်တပ်၏ အုပ်ချုပ်မှုနှင့် နိုင်ငံ၏ ချွတ်ခြုံကျ ဆင်းရဲနေမှု အနာဂတ် အလားအလာကို ဆက်စပ်ဆင်ခြင် တွေးမိလာခြင်း ခံစားချက်ကို ရရှိလာခဲ့ပါသည်။ ကျနော်တို့ ဗိုလ်လောင်းများ ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်ဒေသသို့ ခရီး ထွက်ခဲ့ပါသနည်း။
ထိုနေရာလေးသည် ဟန်ဆောင်မှု ကင်းမဲ့ပါသည်။ မြို့ပြ၏ ယဉ်ကျေးမှုတို့လည်း မလွှမ်းမိုးသေးပါ။ ရှေးမြန်မာတို့၏ မျိုးရိုးဇာတိကို ထိန်းသိမ်းနေသော ဒေသဟု ဆိုလျှင်လည်း ပြော၍ရပါသည်။
ကျနော်တို့ ပြည်သူ့ဘ၀ လေ့လာရေးနှင့် အကျိုးပြုရေး ခရီးစဉ်ကို မန္တလေးတိုင်း တံတားဦးမြို့နယ် ထဲမှ ဆီမီးခုံ ကျေးရွာငယ်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသောအခါ အတော်များများက မသိကြပေ။ မရောက်ဖူး သူများသာ ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
ကျနော်တို့၏ ပန်းမြို့တော်၊ နှင်းမြို့တော် မေမြို့မှ စစ်ကားကြီးများဖြင့် မန္တလေးသို့ ဆင်းခဲ့ပါပြီ။ အအေးပိုင်းမှ အပူပိုင်းသို့ ဆင်းရသည်ဖြစ်၍ ရာသီဥတု၏ ပူပြင်းသော ဒဏ်ကိုတော့ ချွေးဒီးဒီးကျ အောင် ခံရ၏။ လမ်းဘေး ၀ဲယာတလျှောက် ငေးမောကြည့်ရင်း၊ အတွေးတွေ နယ်ချဲ့ရင်း လိုက်ပါ လာ၏။ ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်တွေတုန်းကလို ကားစီးချိန်သည် ကျနော်တို့အတွက် အိပ်စက်ရန် အချိန်မဟုတ်တော့ပါ။ ဘာကိုမဆို လေ့လာ အကဲခတ် နေရမည်ဆိုသော စာပေမှပေးသော အသိ တရား အမွေကြောင့် လမ်းဘေးတလျှောက် လေ့လာရင်း လိုက်ပါလာခဲ့ပါသည်။
ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ရောင်းချသော (ခွက်ပုန်း လောင်စာဆိုင်ဟု ပြောလျှင်ရမည်ထင်၏) တဲပုတ်လေး များ၊ ယာယီတဲလေးများ ဟိုမှသည်မှ တွေ့မြင်ရခြင်းဖြင့် မန္တလေးသို့ ၀င်ကာနီးပြီ ဆိုသည်ကို သိသာရပါပြီ။ မကြာခင် ရွှေမန်းသူ၊ ရွှေမန်းသားတို့၏ ခြေနင်း စက်ဘီးငယ်များဖြင့် လူးလာ ခေါက်ပြန် ခရီးနှင် နေကြသည့်ကြားထဲ စစ်ကားများ ဖြတ်မောင်းသောအခါ မည်သူမျှ ထူးဆန်ဖွယ် မကြည့်ကြောင်း တွေ့ရသည်။ သာမန် တွေ့မြင်နေကျ ဘတ်စ်ကားများ ကဲ့သို့ပင် ရှောင်ကွင်း မောင်းနှင် သွားကြ၏။ သစ်လုံးတင် ကားကြီးများကိုလည်း မကြာမကြာ တွေ့နေရ၏။
စစ်တပ်နှင့် ပြည်သူ ကြည်ဖြူစွာ ရင်းနှီးမှု ရှိနေ၍လား၊ သို့မဟုတ် အရပ်သား၊ အရပ်ဘက် ပြည်သူတို့ အကြားတွင် စစ်အဆောင်အယောင်၊ စစ်သား၊ စစ်ကားတို့ အမြဲတစေ ထိုးဖောက် ထိတွေ့ အုပ်ချုပ်မှုသက်တမ်း ရှည်ကြာလာ၍ စစ်၏အငွေ့အသက် အရိပ်အယောင်ကို မထူးဆန်း တော့ခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော မြန်မာပြည်ကို စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်များ က လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင် စိုးမိုးထားသည်မှာ နှစ်ပေါင်း(၃၀)ကျော်ခဲ့ပြီကိုး။
ထိုအချိန်က မန္တလေးစက်မှုဇုံ စတင် တည်ဆောက်နေပြီဟု ထင်ပါသည်။ ကျနော်တို့ ဖြတ်သွား သော လမ်းတလျှောက်တွင် အဆောက်အဦးများ၊ စက်ရုံပုံစံများ၊ နေရာအနှံ ဟိုမှသည်မှ တွေ့ခဲ့ရ ၏။ ပိုင်ရှင်ဖြစ်ဟန်တူသော တရုတ်မျက်နှာပေါက်နှင့် လူများကိုလည်း ကားကောင်း ကားသန့် များနှင့်အတူ တွေ့ခဲ့ရ၏။ တို့တိုင်းပြည်ကြီး တိုးတက်လာမှာပါဟု စိတ်ထဲက တွေးထင်မိ၏။ သို့သော် ရွှေမန်းသူ၊ ရွှေမန်းသားများ နေပူကျဲကျဲထဲတွင် စက်ဘီးဖြင့် သွားနေသည်ကို မြင်ရ၍ သနားမိသော ကျနော်သည် စက်ရုံပိုင်ရှင် တရုတ်များ၏ ကားကောင်း (အဖိုးတန် အမျိုးအစား) နှင့် ခရီးသွားပုံကို ယှဉ်မိလိုက်သောအခါ များစွာ ရင်လေးလာပါသည်။ တခုခုတော့ လိုနေပါပြီ။ ရွှေခြေကျင်းနှင့် မန္တလာသူတော့ ကျနော်မတွေ့ခဲ့ရပါ။ နောက်ဆုံးပေါ်ကားနှင့် ရွှေတရုတ်ကြီးကိုသာ ကျနော်မြင်ခဲ့ရသလို ရှိ၏။
မန္တလေးမြို့တွင်းမှကျော်၍ တံတားဦးဘက် ဆက်လက် ခရီးထွက်ခဲ့ရာ မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဒေသ၏ ရာသီဥတုအတိုင်း လေပူလေနွေးများ၏ တိုက်ခတ်မှုကို (ဘေးဗလာ)စစ်ကား၏ နောက် ခန်းမှ ထိတွေ့ ခံစားရင်း၊ မကြာမီပင် တံတားဦး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သစ်ကြီး ဆောက် လုပ်ရာ ဒေသသို့ ရောက်ရှိလာ၏။ လားလား- မြို့နှင့် ဝေးလှချည်လား။ ဒီလေဆိပ်ကြီး ပြီးသွား ရင်တော့ မြို့ထဲနှင့် လေဆိပ် ကားခတင် လေယာဉ်ခလောက် ရှိနိုင်တယ်ဟု ကျနော်တို့ ပြောမိ ကြပါသေးသည်။ ဟုတ်ပါသည်။ မန္တလေးမြို့နှင့် တံတားဦး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သည် အတော်ပင် ဝေးကွာပါသည်။ လေဆိပ် တည်ဆောက်မှုကို ခေတ္တလေ့လာ ကြည့်ရှုရပါသည်။
တံတားဦးမြို့ကို ဖြတ်ကျော်သွားသောအခါ မြို့ပြယဉ်ကျေးမှုနှင့် ကျေးလက်ယဉ်ကျေးမှုတို့၏ ရောနှောနေမှုကို စတင်တွေ့ရှိလာရ၏။ မြို့၏ အလယ်လောက်တွင်သာ ဘီယာ၊ ကဖေးဆိုင်အချို့ တွေ့ရပြီး မြို့အစွန်မှ ကျနော်တို့ တာဝန်ကျသည့် ဆီမီးခုံသွားလမ်း တလျှောက်တွင် နွားချေးနံ့ တသင်းသင်း၊ တောပန်းရနံ့ တလှိုင်လှိုင်နှင့် ပျံ့သင်းနေသော လေကို ရှုရှိုက်ရပါပြီ။ ယာမြေသီးနှံ တို့၏ အနံ့လော၊ အလေ့ကျပေါက်သော အပင်တို့မှ ရနံ့လော မသိပါ။ တောင်ပေါ် လေနှင့်တော့ မတူ၊ တမျိုးခံစား ရှုရှိုက်ရပါသည်။ ရံဖန်ရံခါ တောစံပယ်ပန်းလေးများ၏ မွှေးရနံ့ကို ရှုရှိုက်ရပါ သည်။
ဗိုလ်ကြီးနေသူ (အငြိမ်းစားတပ်မတော် အရာရှိတစ်ဦး)
Posted by demoarmy အချိန် 11:03 AM0ထင်မြင်ချက်
လွတ်လပ်ရေး အမျိုးသားနိုင်ငံရေးနှင့် ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှု (ဦးခင်မောင်ကြီး)
၁၉၉၀ ခုနှစ် ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှတ်တမ်း (ဦးခင်ကျော်ဟန်)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရရှိခဲ့ပြီးသော နိုင်ငံတကာ ဆုတံဆိပ်များ
(Updated: May, 2008)
82. An honorary doctorate (LLD) honoris causa Award from University of Cape Town, South Africa, December, 2007
83. Freedom of Glasgow (the freedom of Scotland's largest city ) 2007
88. Honorary Canadian Citizenship, May, 6, 2008
89. the Freedom of the City, June, 10, 2008
90. Catalonia International Prize 2008, MOTHERS OF COURAGE (shared with Dr. Cynthia Maung), November, 2008
91. Honorary Member of the Club of Madrid, November, 20, 2008
92. Honorary Council Member, December, 20, 2008
93. Trumpet of Conscience Award, January, 19, 2009
94. Freedom of the City of Glasgow, 04 March, 2009
95. Mahatma Gandhi International Award for Peace and Reconciliation - MAGI Awards, May, 22, 2009
PDF ဖိုင်ဖြင့် ဖတ်လိုပါက ဤနေရာတွင် ဒေါင်းလုပ် လုပ်ယူပါ
ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ်မှ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ထံ ပေးစ...
နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတက္ကသိုလ် ၏ သင်တန်းသား အမည်စာရင...
♪ Diamond Studded Night (English)
◙ Monks Revolution Continue in Burma
◙ Burmese Poet Aung Way call for People action
◙ Saffron Revolution
◙ Thinking of You
◙ Myanmar activists on the run (06.Nov.2007)
◙ Burma Protests to Toxicity by System of A Down
◙ Free Burma
◙ Buddhist Monks Leading Protest In Rangoon Burma
◙ Monks Praying Soldiers Shooting In Burma
◙ Violent Crack Down On Protesting Monks In Burma
◙ Monks Revolution Continue to Third Day in Burma
◙ Brutal record of september massacre in Rangoon
◙ Rangoon, Burma - September 27.2007
◙ The Buddhist Killer Part(1)
◙ The Buddhist Killer Part(2)
◙ Monks brace for crackdown (Burma )
◙ Monk tells of ordeal(Burma)
◙ Suu Kyi meets junta (Burma) (26/10/07)
◙ October Challenge
မောင်ဒိုင်း ၏ သရော်စာများ
Buddha Ramsi Monestry